E40 18w LED Street Lamp - Mic LED
8:00 pm တွင် ~ 22:00 pm အချိန်
, G စီးရီးရေလွှမ်းမိုးအမြင်
တစ် ဦး ကစီးရီးရေလွှမ်းမိုးအလင်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး LED ရေကြီးမှုအလင်း
တစ် ဦး ကစီးရီးလမ်းအလင်း
ကို C စီးရီးလမ်းအလင်း
: D စီးရီးလမ်းအလင်း
, G စီးရီးလမ်းအလင်း
တစ်ခုမှာဆိုလာ LED လမ်းရှိ
High Bay အလင်းရောင် LED
တစ် ဦး ကစီးရီး UFO အမြင့်ပင်လယ်အော်အလင်း
C စီးရီး UFO အမြင့်ပင်လယ်အော်အလင်း
: D စီးရီး UFO အမြင့်ပင်လယ်အော်အလင်း
E စီးရီး UFO အမြင့်ပင်လယ်အော်အလင်း
L ကိုစီးရီး UFO အမြင့်ပင်လယ်အော်အလင်း
M စီးရီး UFO အမြင့်ပင်လယ်အော်အလင်း
Shoebox အလင်း LED
180 °ပြောင်းဖူးအလင်း LED
တစ် ဦး ကစီးရီးဥယျာဉ်အလင်း
Canopy အလင်း LED
Wall Pack အလင်းကို LED
LED Module အလင်း
B စီးရီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလင်း LED
ကို C စီးရီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလင်း LED
LED Tube အလင်း
LED Panel ကိုအလင်း
နေအိမ်> ထုတ်ကုန်များ> LED မီးအလင်း> E စီးရီးလမ်းမီး> E40 18w LED Street Lamp
E40 18w LED Street Lamp
min ။ အမိန့်အရေအတွက်: 100pcs
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် MIC LED ကိုတည်ထောင်ပြီးကတည်းက R&D စွမ်းရည်၊ ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာအဖွဲ့နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောနှစ်စဉ်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်ထက် ကျော်လွန်၍ နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းကို ဦး ဆောင်နေသည်။
Light Source: LED 18×1w
input ဗို့အား: AC110v ~ 250v
Lumen Value: 1800lm
ဆီမီးခွက် ဦး ခေါင်း: E27, E40
Prev ယခုကိုးကားပါ နောက်တစ်ခု
ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသော 3X6 module ပုံစံ
မူရင်းအမေရိကန် Puri LED ကိုသုံးပါ
universal ဗို့အား: 90-305Vac
High-quality power supply, stable work, high temperature automatic temperature control
အသစ်ထူးခြားသည့်အလယ်အလတ် optical ဒီဇိုင်း၊ လမ်းဓာတ်ပုံများအတွက်စတုဂံနေရာများ
Shenzhen ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်တရုတ်အဆင့်မြင့်သဟဇာတဖြစ်သောအလုပ်သမားဆက်ဆံရေး။ ကျွန်ုပ်တို့သည် High Power LED Street Light မှသည်အခြား LED မီးများအထိ LED ထုတ်ကုန်များကိုလွတ်လပ်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတရုတ်နိုင်ငံရှိ LED အလင်းနှင့်နေရောင်ခြည်သုံးလျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်များတင်ပို့သူများနှင့်ထိပ်တန်းပံ့ပိုးသူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေသည်။ စွမ်းအင်ချွေတာသောဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သည်။
Shenzhen Top-branded Enterprise and China Advanced E40 18w LED Street Enterprise in Harmonious Labor Relations. We independently design and manufacture LED products ranging from High Power LED Street Light to the other LED lights, which qualify us to be one of the largest manufacturers, suppliers, and exporters of LED lighting and solar lights in China, as well as the leading provider in energy-saving solutions.
အလင်းရင်းမြစ် LED 18×1w
input ဗို့အား AC110v ~ 250v
Lumen Value ကို 1800lm
ထောင့် 160 ဒီဂရီ
မီးခွက် E27, E40
Led street light vs hps street lights:5Tips for Home Décor
Which is the best led street light Sydney model?
How to get maximum benefit from led street lights for sale?
How can led street light importer reduce your electricity bills?
ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးမားတဲ့ (သို့) သေးငယ်တဲ့စီမံကိန်းအသစ်တွေရဲ့ collabration ကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ မကြာခင်တနင်္လာနေ့မှစနေနေ့အထိနံနက် ၈း၀၀ နာရီမှ ၂၂ နာရီအကြားဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
MIC သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ LED အလင်းနှင့်နေရောင်ခြည်သုံးလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်ပို့ကုန်များအပြင်စွမ်းအင်ချွေတာသည့်အဖြေများတွင် ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။
LED LIGHTING DISTRIBUTION TYPES
MIC got 1200pcs high mast led flood light of Saudi Arabia Municipality
နေအိမ် ထုတ်ကုန်များ စီမံကိန်းကိစ္စ သတင်း ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ကိုယ်တို့အကြောင်း စက်ရုံခရီးစဉ် လက်မှတ် ကုမ္ပဏီအကြောင်း
©မူပိုင်ခွင့် ၂၀၁၀-၂၀၂၀ - All Rights Reserved ။ HQT